LSR & RUBBER CADAYNTA - Chapman Technology Co., Ltd.
Nidaamkeena waxsoosaarka caag Siliconku wuxuu soo saaraa noocyo caadiya iyo qaybaha soo saarida isticmaalka dhamaadka 15 maalmood ama ka yar. Waxaan u adeegsannaa wasakhda aluminium ee bixiya qalab qiimo jaban iyo wareegyo wax soo saar oo dardar leh, waxaanna dhignaa buundooyin kala duwan iyo durometerka qalabka LSR.
Sidee ayuu u shaqeeyaa wax taaj oo kale Silicone Rubber
Waxyeelaynta LSR waxay waxyar kaga duwan tahay wax isku duroka duritaanka thermoplastic-ka sababtoo ah dabacsanaanta. Sida aaladda caadiga ah ee aluminium, qalabka wax lagu duubo ee LSR waxaa lagu farsameeyaa iyadoo la adeegsanayo mashiinka CNC si loo abuuro qalab heerkulkiisu sarreeyo oo loo dhisay inuu hor istaago hannaanka wax dhisidda LSR. Ka dib markii la shiiday, aaladda ayaa gacanta lagu sifeeyaa qeexitaannada macaamiisha, taas oo u oggolaanaysa lix xulasho oo dhammaystiran dusha sare.
Halkaas, qalabka la dhammeeyay waxaa lagu rakibayaa qalabka wax lagu duubo ee LSR-gaar ah oo sax ah kaas oo si sax ah loogu talagalay xakamaynta saxda ah ee cabbirka tallaalka si loo soo saaro qaybaha ugu habboon ee LSR. At Protolabs, qaybaha LSR ayaa gacanta looga saaraa caaryada, maaddaama biinanka cirbadaha ay saameyn ku yeelan karaan tayada qaybta.
Qalabka LSR waxaa ka mid ah silikoonada caadiga ah iyo buundooyin gaar ah si ay ugu habboonaadaan codsiyada kala duwan iyo warshadaha sida caafimaadka, baabuurta, iyo nalalka. Maaddaama LSR uu yahay polymer-ka heer-kulmiyaha, xaaladdiisa qaabeysan tahay mid joogto ah-marka la dejiyo, dib looma dhaafi karo sida aaladda 'termoplastic'. Markuu orodku dhammaado, qaybo (ama tijaabada hore ee tijaabada ah) ayaa la garaacayaa oo la raraa wax yar kadib.